Thu, Jun 4, 2020 at 8:10pm
पराजित भए पनि आर्सनल युरोपा लिगको प्रि–क्वार्टर फाइनलमा
काठमाडौं, ११ फागुन । अन्तिम १६ मा प्रवेशका लागि बिहीबार राति भएको दोस्रो लेगमा पराजित भए पनि आर्सनल युरोपा लिगको प्रि–क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । समग्रमा जित निकाल्न सफल हुँदै आर्सनल प्रि–क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । बिहीबार राति भएको खेलमा स्वीडिस क्लब अस्टरसन्डसँग २–१ गोल अन्तरले पराजित भए पनि आर्सनलले समग्रमा ४–२ गोल अन्तरको जित निकालेको हो । अघिल्लो साता..
सानिमा बैंकद्वारा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई प्रायोजन, अब मासिक रु ४० हजार पाउने
काठमाडौँ, ११ फागुन : नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्दिप लामिछानेलाई सानिमा बैंकले दुई वर्षका लागि थप प्रायोजन गरेको छ । बैंकद्वारा बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भूवन दाहाल र खेलाडी लामिछानेले दुई वर्षका लागि थप प्रायोजन गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सानिमा विकास बैंकद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्कालाई सम्मान गर्दै कलाकारद्वय..
म्यानचेस्टर युनाइटेडले सेभिल्लासंग खेल्यो बराबरी, युनाइटेडका गोलरक्षक डेविड डी हेयाको उत्कृष्ट प्रदर्सन
काठमाडौँ , १० फागुन । युइएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा इंग्लिश क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड र स्पेनिस क्लब सेभियाले बराबरी खेलेका छन् । बुधबार राति भएको पहिलो लेगमा सेभिया र युनाइटेडले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन् । सेभियाको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् । सेभियाको केहि उत्कृष्ट प्रहार युनाइटेडका गोलरक्षक डेभिड डी गियाले बचाएका थिए..
काठमाडौँ , १० फागुन । दक्षिण अफ्रिकाले सेन्चुरियनमा भएको दोस्रो टी-२० म्याचमा भारतलाई ६ विकेटले हराउँदै शृंखला बराबरीमा ल्याएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको यो जीतसँगै तीन खेलको सीरीज १-१ को बराबरीमा पुगेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै १८८ रन बनायो। भारतका लागि मनिष पाण्डे र महेन्द्र सिंह धोनीले विष्फोटक ब्याटिङ गर्दै ४ विकेट गुमाउंदै..
मनाङलाई हराउँदै विभागीय टोली नेपाल आर्मी हेटौंडा गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश
मकवानपुर, फागुन ९ । विभागीय टोली नेपाल आर्मी हेटौंडामा जारी सुमन भोमजन स्मृति हेटौंडा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ । हेटौंडामा बुधबार भएको प्रतियोगितामा मनाङ मस्र्याङ्दी क्लवलाई १–० ले हराउँदै आर्मीले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ । खेल अवधीभर मनाङले आर्मीलाई दवावमा राखे पनि ८९ औं मिनेटमा जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गर्दै आर्मीलाई उपाधि नजिक र्पुयाएका हुन् । आर्मीले उपाधिको लागि बुधबार..
काठमाडौं, फागुन ९ । धनगढीमा हुने धनगढी प्रिमियर लिगका लागि खेलाडी अक्सन भर्खरै सम्पन्न भएको छ जसमा केहि सोचेका खेलाडीमाथि बोली नलाग्दा केहि नया खेलाडीले राम्रो रकम पाए । दोस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको अक्सन (बोलकबोल) मा ६ टिमका लागि ७२ खेलाडीको भाउ लागेको छ। अक्सनमा राष्ट्रिय टिमका खेलाडी बसन्त रेग्मी, करण केसी, आरिफ शेख र सागर पुन महङगा..
विराट र अनुष्काको खुलेआम किस, विराटलाई भेट्न दक्षिण अफ्रिका पुगिन् अनुष्का
काठमाडौं, ९ फागुन । स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीलाई भेट्न अनुष्का शर्मा दक्षिण अफ्रिका पुगेकी छन् । उनी पछिल्लो एक महिना देखि उन्को आगामी फिल्म ‘सूई धागा’ को सुटिङमा ब्यस्थ थिइन् जस्ले गर्दा कोहलीसंग खासै भेटघाट भएको थिएन । सुटिङबाट फुर्सद मिले लगत्तै उनी विराटलाई भेट्न दक्षिण अफ्रिका पुगेकी हुन् । विराट एक महिना देखि दक्षिण अफ्रिकामा क्रिकेट खेलिरहेका छन् । विराटले..
अफगानिस्तानको सानदार जित, जिम्बाम्बेलाई १४६ रनले हरायो
एजेन्सी, फागुन ९ । लेग स्पिनर राशिद खानको अलराउण्ड प्रदर्शनसंगै जिम्बाम्बेसँगको अन्तिम एक दिवसीय खेलमा अफगानिस्तानले सानदार जित दर्ता गरेको छ । सोमबार शारजहामा भएको अन्तिम एक दिवसीयमा अफगानिस्तानले जिम्बाम्बेलाई १४६ रनले हरायो। यो विजय पछि अफगानिस्तानले ४-१ले सिरिज आफ्नो पक्षमा पारेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित ५० ओभरको खेलमा अफगानिस्तानले ९ विकेट गुमाएर २४१ रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङ..
हेटौंडा गोल्डकपमा मनाङ मस्र्याङदी र आर्मीबीच प्रतिस्पर्धा हुने
काठमाडौ, फागुन ९ । हेटौंडामा जारी सुमन बोम्जन स्मृति हेटौंडा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा आजबाट सेमिफाइनल चरण्का खेलहरु सुरु हुँदै छ । आज हुने पहिलो सेमिफाइनलमा मनाङ मस्र्याङदी क्लब र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगितामा जित हात पार्दै फाइनल प्रवेश गर्ने दाउका साथ मैदान उत्रने यी दुइ टोलबीचको खेल अपरान्न ३ बजेपछि हेटौंडास्थित फरेष्ट्री खेल मैदानमा सुरु हुनेछ । यसअघि हिजो..
च्याम्पियन्स लिगमा चेल्सी र बार्साबीचको खेल बराबरीमा रोकियो
एजेन्सी, फागुन ९ । च्याम्यिन्स लिग अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना र इंग्लीस क्लब चेल्सीबीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नकआउट चरण अन्तर्गत अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा बार्सालाई घरेलु टोली चेल्सीले १–१ गोलको बराबरीमा रोकेको हो । खेलको ६२ औँ मिनेटमा विलियनले गोल गर्दै चेल्सीलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर खेलको ७५ औँ मिनेटमा बार्साका लागि..
प्रदेश नं ४ को सरकारले क्रिकेट खेलाडी केसीलाई एक लाख दिने घोषणा
पोखरा, ९ फागुन । प्रदेश नं ४ का उद्योग, वन, पर्यटन, आपूर्ति तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी करण केसीलाई प्रदेश सरकारका तर्पmबाट रु एक लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिद्वारा खेलाडी केसीको सम्मानमा पोखरा रंगशालामा आज आयोजित कार्यक्रममा सम्मानपत्र र दोसल्लाले सम्मान गर्दै उहाँले आगामी चैत महिनामा आउने प्रदेशको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा खेलकुदको..
इटहरी, ९ फागुन । ‘नेपालय इन्टरनेशनल काठमाडौँ’को आयोजनामा यही फागुन १३ देखि २० गतेसम्म प्रदेश नं १ को एक्सपर्ट अन्तर कलेजस्तरीय नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने भएको छ । स्थानीय कार्यक्रम संयोजक एवं क्रिकेट प्रशिक्षक सिपी पौडेलले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर एक्सपर्ट कलेजस्तरीय नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिताका विषयमा जानकारी दिदै उक्त प्रतियोगिता क्रिकेटका लागि उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि गर्न लागिएको बताए । देशका..
'आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता - २०७५' को लोगो सार्वजनिक गरियो
खजुरा, बाँके, ९ फागुन । विसं २०७५ मंसिरमा नेपालगञ्जमा हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि गीत, नारा र मस्कट हात्तीको छावासहितको लोगो सार्वजनिक गरिएको छ । आउने वर्ष नेपालगञ्जमा हुन लागेको उक्त प्रतियोगिताका लागि लोगोसहित नारा र मस्कट हात्तीको छावा सार्वजनिक गरिएको मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओलीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले लोगो, गीत, नारा र मस्कट..
राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी 'करण केसी' को गृहजिल्ला बागलुङमा भव्य स्वागत, नगदसहित सम्मानित
बागलुङ, ९ फागुन : राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी करण केसीलाई गृह जिल्ला बागलुङमा स्वागत तथा सम्मान गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिका र जिल्ला खेलकुद विकास समितिद्वारा आयोजित समारोहमा केसी नगद रु ५० हजारसहित सम्मानित भएका हुन् । बागलुङ क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा सूर्य पाठक, बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेल र जिल्ला खेलकुद विकास समिति बागलुङका अध्यक्ष धनबहादुर परियारले संयुक्त रुपमा..
नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यलाई जनही ३ लाख दिने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष
काठमाडौं, फागनु ७ । विश्वकप छनोटमा पुग्न सफल नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यहरुलाई सरकारले ३÷३ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । साथै यसमा मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमीले एक(एक लाख रुपैयाँ थप्ने भएको छ । क्रिकेट खेलाडीहरुको सम्मानमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रशिक्षकसहित खेलाडीहरुलाई जनही ३÷३ लाख दिने बताए । यस्तै मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमीका विनोद श्रेष्ठले सरकारले दिएको रकममा एकेडेमीले एकएक..
जिम्बावेमा हुने विश्वकप क्रिकेट छनोट खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा
काठमाडौँ, ७ फागुन : जिम्बावेमा आयोजना हुने विश्वकप क्रिकेट छनोट खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)ले पारस खड्काको कप्तानीमा चार वैकल्पिक खेलाडीसहित १९ सदस्यीय खेलाडीको घोषणा गरेको हो । घोषित टोलीमा कप्तान खड्कासहित उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिलीप नाथ, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, शरद भेषवाकर, आरिफ शेख, रोहितकुमार पौडेल, वसन्त रेग्मी, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, ललित..
नेपाली टिम वर्ल्डकप क्वालिफायर खेल्ने सबैभन्दा युवा टोली, युएईको टोली बढी उमेरका
काठमाडौँ , ७ फागुन । वान डे वर्ल्ड कप क्वालिफायरका खेलहरु आउदो मार्च ४ बाट जिम्वावेमा सुरु हुँदै छ । वान डे वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्ने १० टोलीले आ-आफ्नो टोलीको घोसणा गरेका छन् । दस टिमहरु मध्ये नेपाल सबैभन्दा युवा टोली बनेको छ । नेपाली टोलीको १५ सदस्यीय टोलीको घोसणा गरिएको छ जसको कप्तानी पारस खड्काले गर्ने छन् । नेपाली टोलीको औषत..
विश्व फुटबलमा नयाँ रेकर्ड , एउटै खेलमा १० रेड र ८ एल्लो कार्ड
काठमाडौँ , ७ फागुन । ब्राजिल फुटबल दुनियाँको एक उर्बर भुमि मानिन्छ । यहाँ विश्व जगतका प्रख्यात हस्तीहरुको जन्म भएको छ । तर हिजो भएको एक खेलमा अनौठो घटना भयो । ब्राजिलमा एउटै फुटबल खेलमा रेफ्रीले १० वटा रातो कार्ड र ८ वटा पहेलो कार्ड देखाएका छन्। ब्राजिलको बाहिया स्टेट च्याम्पियनसीप फुटबल प्रतियोगिताकामा बाहिया र भिटोरिया क्लबबीचको खेलमा रेफ्रिले कार्डको वर्षा नै गरे..
'खोटाङ–हलेसी खुला अन्तर्राष्ट्रिय कराते' प्रतियोगिता वैशाखमा हुँदै
खोटाङ, ७ फागुन । वैशाख तेस्रो साता खोटाङमा खोटाङ–हलेसी खुला अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ खोटाङको आयोजनामा २०७३ साल जेठ २० देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको प्रथम खोटाङ–हलेसी खुला अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताकै निरन्तरता स्वरुप आगामी वैशाख २०, २१ र २२ गते दिक्तेलमा जिल्लाको हालसम्मकै ठूलो धनराशिको दोस्रो खोटाङ–हलेसी खुला अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता गर्न लागिएको..
भारतले दक्षिण अफ्रिकालाई २८ रनले हरायो, तीन टी-२० खेलमा भारतलाई १-० को अग्रता
काठमाडौँ , ७ फागुन । भारतले पहिलो टी–२० खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई २८ रनले पराजित गरेको छ । पहिले टस हारेर ब्याटिङ गरेको भारतले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै २०३ रन बनाएको थियो। दक्षिण अफ्रिकी भूमिमा भारतले टी–२० मा पहिलो पटक २०० रन पुरा गर्ने क्रममा भारतका लागि शिखर धवनले ७२ रन , मनिश पाण्डेले २९ तथा कप्तान विराट कोहलीले २६ रन बनाएका..
पिएसजीले गर्यो गोलको बर्षा, स्ट्रास्बोउर्गलाई ५–२ ले हरायो
काठमाडौ ६ फागुन । पिएसजी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा रियल मड्रिडसँग ३–१ ले पराजित भएलगतै धेरै टिकाटिप्पणीहरु भएका थिए । धेरै विश्लेषकहरुले पिएसजीको आलोचना गरेका थिए । तर च्याम्पियन्स लिगको उक्त लयलाई भने पिएसजीले घरेलु लिगमा देखाएको छैन । सनिबार राती भएको खेलमा पेरिस सेन्ट–जर्मेन (पिएसजी) ले घरेलु लिगमा जितलाई निरन्तरता दिएको छ। फ्रेन्च लिग वान फुटबल..
म्यानचेस्टर युनाइटेड एफए कपको क्वाटरफाइनलमा
काठमाडौ ६ फागुन । म्यानचेस्टर युनाइटेड एफए कप फुटबलको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । शनिबार राति भएको पाँचौ चरणको खेलमा हडर्स्फिल्ड टाउनलाई २–० ले हराउँदै म्यानचेस्टर युनाइटेड क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। हडर्स्फिल्ड टाउनको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा युनाइटेडलाई जिताउन रोमेरो लुकाकुले दुई गोल गरेका थिए । खेलको पहिलो हाफको तेस्रो मिनेटमै गोल गर्दै लुकाकुले युनाइटेडलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए । त्यसैगरी पहिलो..
स्पेनिश ला लिगामा बार्सिलोनाको अपराजित यात्रा कायमै, ६२ अंक जोडेको बार्सा शीर्ष स्थानमा
काठमाडौ ६ फागुन । आईबारलाई पराजित गर्दै बार्सिलोनाले स्पेनिस लिग फुटबलमा अपराजित यात्रा कायम राखेको छ । गएराति भएको खेलमा बार्साले आईबारलाई उसैको मैदानमा २–० ले पराजित गरेको हो । बार्सिलोनालाई विजयी गराउन लुईस सुवारेज र योर्डी अल्बाले एक एक गोल गरे । जितसँगै बार्सिलोनाले लगातार ३१ खेलको अपराजित कीर्तिमानलाई बराबरी गरेको छ । अब एक खेलमा अपराजित रहेमा बार्सिलोनाले नयाँ क्लव कीर्तिमान..
सुमन भोम्जन स्मृति हेटौँडा गोल्डकपमा विजय युथ क्लब र नेपाल पुलिसबीच प्रतिस्पर्धा हुदै
काठमाडौ ६ फागुन । मकवानपूरको हेटौंडामा जारी सुमन भोम्जन स्मृति हेटौँडा गोल्डकप फुटवलमा आज घरेलु टोली विजय युथ क्लव र नेपाल पुलिसबीच प्रस्पिर्धा हुँदैछ । खेल हेटौडास्थित फरेष्ट्रि मैदानमा दिउँसो सुरु हुनेछ । यसअघि हिजो भएको उद्घाटन खेलमा मनाङ–मस्र्याङ्दी क्लवले एपीएफलाई १–० ले पराजित ग¥यो । सुमन भोम्जन स्मृति खेलकुद प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा ए डिभिजनका ६ सहित ८ टोलीको सहभागिता छ । प्रतियोगितामा..
‘स्केट’ खेलमा आकर्षित हुँदै नेपाली युवा, उचित प्रवर्धनको खाँचो
काठमाडौँ, ६ फाल्गुन । कोटेश्वरस्थित ग्रामीण कलेजको कक्षा ११ मा अध्ययनरत् सन्दीप शाह ठकुरी दिनमा दुई घण्टा स्केट खेल अभ्यासमा व्यस्त हुन्छन् । स्केट खेलमै आफ्नो भविष्य देखेका सन्दीप प्रत्येक दिन २ बजेपछि स्केट खेलको अभ्यासका लागि सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिषरमा पुग्छन् । “मेरो दाइले सानामा स्केट खेल खेलेको देखेपछि म पनि यस खेलमा आकर्षित भएको हो, सुरुमा घरमा बा र आमाले गाली गर्नुहुन्थ्यो,..
उपविजेता 'नेपाली क्रिकेट टोली' स्वदेश फर्कियो, समर्थकद्वारा भब्य स्वागत (फोटोसहित)
काठमाडुं ६ फागुन : आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन दुईको उपविजेता बन्दै एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनोट चरणमा पुग्न सफल नेपाली टोली शनिबार साँझ स्वदेश फर्किएको छ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्व खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइली एवं नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए । आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टू को उपविजेता बनेर फर्केका नेपाली क्रिकेट टोली त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय..
थाहा पाउनुहोस कुन १० फुटबल खेलाडीका छन् आ-आफ्नै निजी जहाज
काठमाडौँ, ४ फागुन । करोडौँ दर्शक लाखौँ फ्यानका धनी विश्वका चर्चित फुटबलरहरूको लाइफस्टाइल कस्तो होला ? सबैमा यो चासो त अवस्य नै हुन्छ । क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, काकाजस्ता खेलाडीको लाइफस्टाइल सामान्य भने अवस्य नै छैन । निजी विमानमा यात्रा गर्ने हैसियत उनीहरूको रहेको छ : १०. रोनाल्डिन्हो (ब्राजिल) मोडल: इम्ब्रेयर फेनोम १०० मूल्य: २६ लाख पाउन्ड रोनाल्डिन्हो कुनै समयका विश्व फुटबलकै स्टार खेलाडी मध्येका एक..
अष्ट्रेलियाको किर्तीमानी रन चेज, न्युजिल्याण्ड ५ विकेटले पराजित
४ फागुन, काठमाडौं । न्युजिल्याण्ड विरुद्धको त्रिकोणात्मक टी–२० क्रिकेट श्रृखंलामा अष्ट्रेलिया ५ विकेटले विजयी भएको छ । पहिले ब्याटिंग गरेको न्युजिल्याण्डले ६ विकेटको क्षतिमा २ सय ४३ रन बनायो । यो योगफल तयार गर्ने क्रममा मार्टिन गुप्तिलले ४९ बलमा आफ्नो शतक पुरा गरेका थिए । अक्ल्याण्डमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टिम न्युजिल्याण्डले निर्धारीत २० ओभरमा ६ विकेट..
आखिर किन युएईका कप्तान सन्दिप लामिछानेको सफलतामा जले ?
४ फागुन, काठमाडौं । नेपाली युवा बलर सन्दिप लामिछाने डिभिजन टू प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन् । नेपालले फाइनल गुमाएपनि सन्दिप ‘प्लेयर अफ दि टुर्नामेन्ट’ घोषित भएका हुन् । प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिँदै शीर्ष बलर भएका नेपाली बलर सन्दीप लामिछानेले १७ विकेट लिए। ओमानका बिलाल खानसँगै सर्वाधिक १७ विकेट लिएका सन्दीप राम्रो इकोनोमीका कारण अगाडि आएका हुन्। सन्दीपले युएई विरुद्ध फाइनलमा..
Results 1918: You are at page 55 of 64